IPad saamiga suuqa ayaa kordhay rubuca koowaad ee sanadka | Wararka IPhone
Saamiga suuqa IPad ayaa kordhay rubuca koowaad ee sanadka
Apple ayaa iyada ku qodbay iyada iPad. Markii la soo bandhigay markii ugu horreysay, kow iyo toban sano ka hor, waxaa jiray dad badan oo wax dhaleeceeya oo sheegay inay tahay mobilo aad u weyn, isla markaana aysan aqbalin wicitaannada codka. Taasi waxay noqon laheyd fiasco.
Waxay si dhakhso leh u dejisay isbeddelka iyo inta kale ee sumadaha ay ku degdegeen inay soo saaraan wixii u dhigma kiniin, muuqaal iyo muuqaal. Maanta, waxay ku jirtaa caafimaadka iibka oo aad u fiican, sida lagu muujiyey tirooyinka suuq ee rubuckan koowaad ee sanadka hadda socda.
Counterpoint, Khabiir ku xeel dheer cilmi baarista suuqa, ayaa hada daabacay warbixintiisa suuqa aduunka ee kiniiniyada, taasi oo muujineysa in saamiga suuqa ee iPad-ku uu mar kale sii kordhayo, maadaama ay dhacayeen sanadba sanadka ka dambeeya.
Apple horay ayuu u kordhay a 33% iibinta badan ee iPad-ka 2020 marka loo eego 2019, xogtuna waxay muujineysaa in warka wanaagsan uu sii soconayo rubuca koowaad ee sanadkan ...
Warbixinta Counterpoint ayaa sharraxaysa in saamiga Apple ee suuqa kiniinnada adduunka uu koray laga bilaabo 30% rubuca hore ee 2020 ilaa 37% isla rubucii sanadkan.
Inta badan unugyada la iibiyo ayaa inta badan diiradda lagu saaray Ipads si aad u qalajiso, moodooyinka ka jaban kuwa dhexdhexaadka ah ee iPad Air, iyo dheecaanka iPad Pro, aad uga qaalisan kuwii hore. Weli, Counterpoint wuxuu xoojinayaa iibka wanaagsan ee bartamaha iyo baaxadda sare.
Shaki la'aan bilawga hadda iPad Air bishii Oktoobar ee sanadkii hore iyo sida wanaagsan ee loo aqbalay xagga naqshadeynta iyo waxqabadka, waxay gacan ka geysatay kordhinta iibkaan. Hadda, ka dib markii la bilaabay iPad Pro leh M1 processor, hubi inay u adeegi doonto inay ku sii socoto tirooyinka iibka wanaagsan ee dhammaan qoyska iPad-ka.
Apple sidoo kale waxay ku dhawaaqday WWDC21 dhowr waxyaalood oo cusub oo ku jira iPadOS 15, oo ay ku jiraan aaladda widget-yada shaashadda guriga iyo shaqooyin badan oo la hagaajiyay. Wax walbaa way caawiyaan si iPad-ku uu u helo caafimaad bir ah, xitaa haduu ka sameysan yahay aluminium.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Saamiga suuqa IPad ayaa kordhay rubuca koowaad ee sanadka
Mustaqbalka AirPods wuxuu ku lug yeelan doonaa isku dhafka dareemayaasha si loola socdo caafimaadkeena
Deezer waxay dib u naqshadeyneysaa barnaamijkeeda Deezer ee Abuuraha, qalab falanqeyn loogu talagalay muusikiistayaasha iyo boodhadhka